#बलात्कार | Suvadin !
आश्रममा नभेटिएपछि बमजनलाई खोज्दै सीआईबीसहितको टोली
काठमाडौं । बलात्कार, हत्या, हिंसासम्बन्धी विभिन्न आरोप लागेका तपस्वी रामबहादुर बमजम सिन्धुलीस्थित आश्रमबाट फरार भएका छन् । एक वर्षअघि सर्लाहीकी रीता बोट नामकी बालिका बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा बिहीबार जिल्ला अदालत सर्लाहीले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा केन्द्रीय अनु...
काठमाडौं । अनुयायीमाथि बलात्कार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका चताराधामका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई उच्च अदालत विराटनगरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालत सुनसरीले तीन लाख धरौटीमा छोड्न गरेको आदेश बदर गर्दै उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिए...
Suvadin Media 142 0
सिद्धबाबालाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
सुनसरी । आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीमा भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । सिद्धबाबाविरुद्ध १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै गत बिहीबार मुद्दा दर्...
विराटनगर । बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा कृष्णदासजी महाराजलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले सात दिनको म्याद थपेको छ । विराटनगरस्थित विराटनगर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका सिद्धबाबालाई शुक्रबार म्याद थपका लागि अदालत लगिएको थियो । आफ्नै महिला अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोप खेपिरहेका महाराजलाई सोमबार प्र...
बलात्कारको आरोप लागेका आरआरका स्ववियु सहसचिव कारागार चलान
काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका रत्नराज्य क्याम्पसका स्ववियु सहसचिव इन्द्रहाङ राई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कारागर पठाउने आदेश गरेसँगै उनलाई कारागार चलान गरिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलाशले बिहीबार उनलाई थुनामा पठाउने आद...
२ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने वृद्ध पक्राउ
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा साढे २ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा ६५ वर्षीय वृद्धलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सुनवल नगरपालिका–६ का कुमबहादुर गुरुङ रहेका छन् । गुरुङविरुद्ध बालिकाका आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएपछि सोमबार प्रहरीले पक्राउ...
हार्ड ड्रिङ्क सेवन गर्दिन, रोशनीको घरमा छिरेको छैन : महरा
काठमाडौं । बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष बयान दिँदै आफूमाथि लगाइएको आरोप झुठ भएको बताएका छन् । उनले आफूले हार्ड ड्रिङ्क सेवन नगर्ने गरेको समेत बताएका छन् । आफूले रोशनीलाई पहिलेदेखिनै चिन्दै आएको भए पनि उनको फोन नउठे पछि उनको घर...
वीरगञ्ज । छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । कोल्हवी–२ बस्ने ३८ वर्षीया बाबुले २२ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । बिहीबार पीडित महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् । पीडितको उजुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी...
Suvadin Media 139 0
बलात्कारपछि एक किशोरीलाई जिउँदै जलायर हत्या गर्ने सोह्र जनालाई मृत्यु दण्ड
एजेन्सी । बङ्गलादेशको एक अदालतले १६ जनालाई बिहीबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । उनीहरुलाई एक छात्रा जीवितै जलाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो । गत अप्रिल महिनामा फेनी नगरमा १९ वर्षीया नुसरत जहान रफीको जलाएर हत्या गरिएको थियो । नुसरतले एक शिक्षकले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरो...
महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका–१० थापा टोलस्थित मरहा खोलामा एक युवतीको बलात्कार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक किशोर आचार्यका अनुसार गौशालाकी युवतीको बलात्कार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा मरहा खोलामा बिहीबार बिहान शव फे...
अब महरालाई के हुन्छ ? यस्तो छ करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महारामाथि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेपछि नयाँ तरंग पैदा भएको छ । कसैले कल्पना नगरेको आरोप सभामुखमाथि लाग्दा अहिले सबैलाई जस्काइदिएको छ । झनै झस्किएका छन् नेकपाका नेताहरू । सोमबार महरामाथि संसद् भवनमै कार्यरत एक महिलामाथि यौन दूर्यवहार गरेको आरो लागेको ह...
प्रहरी हवल्दारले १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्न खोजेपछि...
डोल्पा । समाजमा र राष्ट्रको सुरक्षाको पहरेदार गरि शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम राख्ने कसम खाएको प्रहरीले नै एक बालिकालाई बलात्कार प्रयास गरेको खबर सुन्दा अचम्म लाग्ला । तर डोल्पामा यस्तै घटना घटेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२ रुमस्थित वडा कार्यालय सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी चौकी त्...
Suvadin Media 861 0
DilipKarki 277 0